Ukraine International Airlines manampy ny fianakavian'ireo niharam-boina PS752
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ukraine International Airlines manampy ny fianakavian'ireo niharam-boina PS752
Ukraine International Airlines dia manome fanampiana ho an'ny fianakavian'ireo niharam-boina PS752
Ukraine International Airlines dia manohy manome ny fianakavian'i PS752 mpandeha sy ekipa manana ny fampahalalana, ara-dalàna ary ara-pihetseham-po amin'ny fanohanana ao amin'ny Birao Foiben'ny orinasa ao Kyiv ary koa ny Ivotoerana fanampiana ny fianakaviana any ivelany.
Mety tsy ho sitrana mihitsy isika noho ny fanaintainan'ny fianjerana fiaramanidina UIA izay namoizana ain'olona 176 sy ekipa tamin'ny 8 Janoary 2020, tany an-danitra Iran. Tsapan'ny Okraina Iraisam-pirenena ny isam-pianakaviana sy ny olona voakasik'izany. Efa ho iray volana izay no nisehoan'ny lozam-pifamoivoizana PS752 tao Tehran. Saingy, ny fitomaniana ataon'ny ekipa UIA, ny fianakaviana ary ny naman'ny maty dia lavitra ny milentika.
“Ny eritreritsika sy ny fonay dia miaraka amin'ireo mpandeha sy ekipa PS752. Ity fatiantoka mahatsiravina ity dia hijanona ho takaitra hatrany amin'ny Ukraine International, "- hoy i Yevhenii Dykhne, CEO UIA, amin'ny anaran'ny ekipa iray manontolo.
Raha te hifandray amin'ny havan'ireo mpandeha sy ekipa PS752, nanomboka tamin'ny andro voalohany, ny Ukraine International dia nanomboka nanolotra ny vaovao, fanampiana ara-dalàna ary ara-pientanam-po tamin'ny alàlan'ny Biraon'ny Lehiben'ny fiaramanidina sy ny solontenan'ny orinasa. Hotlines any Ukraine (iraisam-pirenena), Kanada, ary Iran - ireo firenena namoy ny ankamaroan'ny olom-pirenena - dia miasa mandrakariva.
Ukraine International Airlines mitazona fifandraisana hatrany amin'ireo tompon'andraikitra Iraniana sy ny Masoivohon'i Okraina ao amin'ny Repoblika Islamika Iran momba ny entana izay eo ambany fahefan'ny vatan'ny Iraniana ankehitriny. Ny zotram-piaramanidina dia manao izay farany vitany mba hamerenana amin'ny fianakaviany ny fananan'ireo mpandeha sy ekipa PS752 manokana.
“Tsapanay tanteraka fa ny fanohanana ara-bola amin'ny fotoana ilana azy dia zava-dehibe amin'ny fianakavian'ireo mpandeha sy ekipa. Ankafizinay ny fanoloran-tena sy ny ezaka mahomby ataon'ireo mpisolovava iraisampirenena, orinasa fiantohana ary fiantohana indray izay ataon'izy ireo mba handraisana fepetra manokana mikendry ny fahazoan-dàlana any Etazonia ary manomboka amin'ny famerenam-bola ao ambanin'ny fehezin'ny fitondrana sazy. Ny fahatakarana sy ny fandraisan'anjaran'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny momba ny fe-potoana famerenam-bola dia zava-dehibe sy ilaina. Amin'izany lafiny izany dia antenainay ny hamaranana ny fombafomba ara-dalàna rehetra ato ho ato, ”- hoy ny nomarihin'i Yevhenii Dykhne.
Ny zotram-pitaterana an'habakabaka dia maneho fankasitrahana ny Governemanta any Okraina sy Kanada tamin'ny nanendrena ireo manam-pahaizana hanadihady momba ny voina nitranga teny an-toerana. Miantso ny Governemanta any Okraina, Kanada, UK, Suède ary Afghanistan ny governemanta iraisam-pirenena Ukraine izay mijoro amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay ahafahana manao fanadihadiana lalina sy mangarahara amin'ny anton'ny fianjerana fiaramanidina UIA, manampy amin'ny famaritana ny andraikitra sy ny onitra.
“Tsy afaka mamadika ny fotoana izahay. Na izany aza, ao anatin'ireny fotoan-tsarotra ireny, dia manao izay ezaka rehetra izahay mba hanomezana fanampiana lehibe indrindra ho an'ireo fianakavian'ireo mpandeha sy ekipa PS752 ”, - namintina i Yevhenii Dykhne.